Sharciyada aasaasiga ah ee arooska ee kaniisadda
Arooska kaniisadda waa dhaqan dhaqameed oo ah qarniyaal dambe. Tani waa xusuusta oo xoogga saarta saldhigga aasaasiga ah ee ruuxiga ah ee guurka iyada oo ah isbahaysiga labo kalgacayl. Sidaa daraadeed, ragga dhallinyarada ah waa inay u yimaadaan taajkii oo keliya iyagoo ogolaansho is haysta iyo rabitaan ah inay xoojiyaan ururka hortiis. Waa inay dareemaan inay dhab ahaantii u baahan yihiin aroos, oo ay diyaar u yihiin inay dhawraan amarrada Masiixiyiinta. Arooska kaniisadda wuxuu gebi ahaanba ka duwan yahay diiwaangelinta rasmiga ah. Tani waa tallaabada ugu weyn ee aan la ilaawi Karin oo weligeedba isha lagu hayo. Gabagabada gabagabada guurka ee diiwaan-gelinta ayaa dhowaan lumay.
Marka aad raadinayso dareemo cusub, qoto dheer oo macquul ah, casriga casriga ah ayaa si sii kordhaya u soo jeeda xafladaha aroosyada. Tani waa dhacdo aad u xiiso badan, dad badan oo cusub waxay qirayaan in guurka ay si weyn u caawiyeen xafladaha arooska, kuwaas oo siiyay dareenkooda qoto dheer iyo caqiido ahaan, waxay dib u eegayaan fikradaha noocaas ah sida kalsoonida iyo ixtiraamka xagga midnimada. Haddii aad ka fekereyso arooska, ha qaadin go'aamada deg-degga ah: waayo alaabtaadu waxay u baahan tahay diyaar.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad dooratid taariikhda arooska arooska, iyo marka labaad, si aad u ogaato shuruucda aasaasiga ah ee arooska ee kaniisadda iyo, ugu dambayn, si aad u soo qaadato dharka. Sharciyada aasaasiga ah ee arooska kaniisadda waa mid fudud. Nidaamka arooska looma qabin inta lagu jiro soonka: midna maalin ama maalmo badan. Sida laga soo xigtay dhaqanka Orodka, ubaxa waa in ka badan 18 sano, iyo aroosadda - 16 sano. Waxaa jira xayiraadyo kale - kaniisku ma aqbalo guurka dhowr iyo guurka guurka afraad ee aan suurtagal ahayn. Caqabadaha guurka, intaa waxaa dheer, xiriirka dhiigga ee u dhexeeya aroosadda iyo arooska ama joogitaanka mid ka mid ah xanuunada maskaxda. Munaasabada arooska looma hayo loogu talagalay loogu talagalay, dadka diinta kale ama cibaadada qanacsan ee u arkaan in ay tahay isbeddel casri ah. Ducada waalidku waa suurad wacan tahay arooska kaniisadda, laakiin maqnaanshahoodu kama horjoogsanayo xafladda haddii uuraystayaashu ay gaadhay qaangaadhka. Uurka sidoo kale ma aha caqabad.
Haddii dhalinyaradu ay ka soo baxaan shuruudahan, waxay u baahan doonaan inay doortaan kaniisad laba illaa seddex isbuuc ka hor intaan la dhicin oo ay booqdaan si ay u bartaan sharciyada iyo habka udubdhiska. Inta badan, xafladaha arooska waxaa qabanaya wadaadkeed, laakiin xaaladaha qaarkood marwalba waxaa loo oggol yahay inay u dhaqmaan si ay ula dhaqmaan aabahooda ruuxa. Haddii aad qorsheyneyso inaad qaadato sawirro iyo fiidiyowyo, waxaad u baahan tahay inaad wada xaajoodoto wadaadka. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa gambaleelka iyo kaniisada kaniisadda, inkasta oo kaniisadaha qaar ay mar hore ku jiraan cibaadada.
Kaniisadaha intooda badan, arooska waxaa lagu qabtaa ballan, sidaa darteed, xulashada waqtiga iyo taariikhda jadwalka, hubi inaad ka xaqiijiso wadaadka macbudka. Arooska waxaa la qabtaa kaddib markii diiwaangelinta guurinta ee xafiiska diiwaanka, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato shahaadada guurka. Aroosadda iyo arooska inta lagu guda jiro xafladda waa inay ahaataa iskutallaab, maxaa yeelay baabtiiska oo keliya ayaa is qabi kara. Waa lagama maarmaan in aroosadda ay xiran tahay qalab, oo ay ugu yarayd samaynta oo aysan ku isticmaalin cadar leh ur yaryar. Masax dheer oo qurux badan ayaa dabka ka qaadi kara. Aroosadda munaasabadda ayaa qaban doonta shamac iyada oo gacmaheeda siinaysa hore u sii fiican.
Haddii aroosadda uu xiranayo dharka arooska furan, ka dibna dhar ayaa loo baahan yahay si loo daboolo gacmaheeda, laabta iyo gadaal. Ritual waxay qaadataa ilaa 40 daqiiqadood, laakiin waxay sidoo kale soo jiidi kartaa, sidaa daraadeed waxaa lagu talinayaa in lagu xiro kabo raaxo leh leh cidhib hoose. Tan iyo markii aan ka hadleyno aroosadda, waxaan isla markiiba joojin doonnaa xilliga muhiimka ah - dharka arooska. Dharka arooska ayaa ka duwan kan arooska iyadoo tareen khasab ah. Dharka noocan oo kale ah waa sifo aan aheyn oo keliya Orthodox, laakiin sidoo kale ka mid ah ritual Catholic. Marka xafladda ay dhammaato, tareenku waa la nadiifin karaa ama waa la jiidan karaa.
Laakiin si loo ilaaliyo dhererkeeduna ma socdo, waxaa jira aaminaad ah in muddo dheer ay tahay, inta dheer ee lamaanuhu wada noolaan doonaan. Intaa waxaa dheer, dharka arooska waa in uusan noqon mid aad u badan oo raaxo leh, by caado u calaamad u ah sharaf iyo xishoodka aroosadda. Sida caadiga ah waa caddaan. Sida kor ku xusan, dharka waa in uu daboolaa gacmaha, laabta iyo gadaasha aroosadda, ama dhar gashan. Dharka arooska looma baahna dharka arooska, waxa uu noqon karaa mid sahlan oo fudud oo ka mid ah treenka iftiinka. Si kastaba ha ahaatee, inta badan aroosyada ayaa doorbidaya in ay is-qabtaan dharka arooska. Xaaladdan, waa inaad ka fogaato qaababka gaaban oo aad u adag oo aad u hubso inaad isticmaasho ilag. Oo hadda dib ugu noqo habka arooska ee kaniisadda. Qalabka Wedding waa in la siiyaa wadaadka ka hor inta uu bilaabmayo, gacmaha aroosadda iyo arooska waa in ay noqdaan horay-looxyo quduuska ah.
Inta lagu jiro caadada, waxay qaadan doontaa wakhti dheer si ay u ilaaliso taajirrada madaxyada aroosadda iyo arooska, waa waajibaadka ragga ugu fiican. Waa lagama maarmaan in ragga ugu fiican ay dheer yihiin, sababtoo ah ma fududa in la haysto muddo dheer. Waxaa jira shumacyo kale: joogitaanka haweenka ku jira ubaxyada aan loo baahnayn, iyo haddii ay kuwa ka mid yihiin martida, waxaa habboon in la siiyo meel meel dhexaad ah. Qof kasta oo joogo ma tixraacayaa arooska arooska, waayo qaar ayaa ah nidaam adag oo caajis ah.
Martida noocan oo kale ah ayaa ku habboon booska dambe. Jiritaanka dhammaan martida ayaa lagama maarmaan u ah, sidaas darteed ka-qaybgalayaasha ka-qaybgalayaasha waa la hor marin karaa. Munaasabada guurka ayaa u baahan in si adag loo ilaaliyo dhaqamada kaniisadaha iyo xeerarka. Ugu horreyntii, wadaadku wuxuu siinayaa aroosadda iyo shumaca shumaca gubaya, ka dibna - wuxuu ku dhajiyaa arooska arooska: marka hore farta dharkiisa, ka dibna farta aroosadda - ka dibna bedelo saddex jeer. Arooska waxaa la doortay dahab, aroosadda - giraan lacag ah. Iyada oo ay sabab u tahay isbeddelada siddeedda, girgir dahab ah ayaa la joogaa aroosadda, iyo giraanta lacag ee arooska.
Ka dib markii ay isweydaarsadaan, dadka cusub waxay u tagaan bartamaha macbadka, wadaadkuna waxay waydiiyaan haddii ay guursadaan rumaysad wanaagsan iyo inay jiraan caqabado. Jawaabaha waxaa soo raacaya salaadda iyo caleemaha waxaa la geeyaa madaxa madaxda cusub. Dabadeedna waxaa la soo saaraa weel khamri ah, oo muujinaysa farxad iyo cidhiidhi, taas oo loo adeegsado aroosadda saddexda xero. Taas ka dib, wadaadku wuxuu haystaa aroosadda iyo aroosadda saddex jeer oo leh gacmaha isku xidhan ee kiniisadda heesaha ku hareeraysan analo. Ugu dambaysta, waxay ka kici doonaan irdaha King ee meesha allabariga iyo dhagaysta hagaajinta wadaadka. Taas ka dib, ciyaalka waxaa loo tixgeliyaa dhamaystiran, dhallinyaradu waxay helayaan hambalyo saaxiibbada iyo qaraabada.
Arooska ka dib is-qabad muddo-gaaban ah - miyuu ku keeni doonaa farxad?
Arooska casriga ah ee Russia
Qalabka arooska ugu qaalisan
Meelo aan caadi ahayn ee sawirrada arooska
Waajibaadka markhaatiyaasha arooska
Halkee ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo malab
Sida loo doorto ilaalinta saxda ah ee ka hortagga kaneecada
Maxaynu ku riyaynaa geedaha?
Dhiirigelinta maqnaanshaha dareenka carruurta, ogaanshaha iyo daaweynta
Raashinka raashinka ah ee loogu talagalay saxanka daaqsinta duurjoogta ah
Xaqiiqooyin naxdin leh oo ku saabsan fitamiinada
Tufaaxa bustaha ee bacda
Sidee loo dhaqmaa si qofku hadiyado u bixiyo?
Wedding of Tarasova iyo Kostenko: Victoria Lopyreva qafaashay aroosadda, sawir
Baradhada leh boqoshaada porcini ka hoos maraan khudradda qudaarta
Anfisa Chekhova waxay muujineysaa sirta miisaankeeda, sawir
Hawlo Muddo Badan: Sida loo doorto dharka arooska oo leh tareen
Daaweynta Ozone Badi ahaan: faa'iidooyinka, calaamadaha, khilaafka
Jinsiga iyo uurka ayaa ku habboon
Sida loo diyaariyo USE ee Bayolojiga
Waa maxay farxadda dumarku?
Sida loo baro cunugaaga inuu cuno khudradda iyo miraha?
Muddada uurku waa 18 toddobaad